အိမ်ရာဥပဒေ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းသည်ရေချိုဖြစ်ပါသလား။ ရေပေးဝေရေးနှင့်မိလ္လာစနစ်သည်လည်း comm ဖြစ်ကြသည် payments.M ။ ခ။ သင်၏ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများအရရေပေးဝေမှု (ရေပူနှင့်ရေအေး) ကိုအလုပ်ရှင်မှပေးသည်၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုများ -
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရောင်းတဲ့အခါဘယ်အချိန်မှာစစ်ဆေးသင့်သလဲ။ ၀ ယ်သူနှင့်သင်သဘောတူသည့်အတိုင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကစာရွက်စာတမ်းများပေးပို့သည့်အချိန်တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပိုက်ဆံကို ၃ ခုခွဲထားတယ်။
ငါ GBS-15 2007g နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသွားမပေးတန်ပြန်သငျ့သညျ။ ကောင်တာပေါ်လိုအပ်သောစံကိုက်ညှိကြားကာလများကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးတစ်ခု
ငါ့မှာတန်ပြန် SGV-15 2007 ရှိသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိပါ။ ထိုအခါပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးမီတာများအတွက်စံကိုက်ညှိကြားကာလပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ Code ကိုမှကြေညာချက်ရေးပါနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ကြောင်းညွှန်ပြ, ငါသည်သင်တို့အဘို့အသင်၏ကိုယ်စားလှယ်ပေးပို့ဖို့ ...
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရှိစာတိုက်ပုံးများကိုမည်သူပြင်သင့်သနည်း။ အလေ့အကျင့်ကရွေးချယ်စရာများဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ အမှန်စင်စစ်စာတိုက်ပုံးများသည်နေထိုင်သူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် "Post of Russia" နဲ့လုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကသင့်ကိုစာတိုက်ပုံးအသစ်များတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည် ...
HOLOST အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Notarized certificate) ဤသည်မှာလက်မှတ်မဟုတ်ပါ၊ မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်များကိုသင်လက်ထပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထုတ်ပေးသောစျေးနှုန်းမှာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်
တိုက်ခန်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းရောင်းဝယ်မှုကိုထောက်ပံ့ရန်ရှေ့နေမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။ ငါအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အေဂျင်စီအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ငါသူတို့ကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်လိုက်တယ်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေနေပုံရတယ်၊ ၃ နှစ်ကျော်နေပြီ။ )) ဟုတ်တယ်၊
ငွေပေးချေခြင်းမပြုခြင်းအတွက် disconnect လုပ်ပြီးသည်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။ မေးခွန်းမှာစားသုံးသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုမပေးသည့်အတွက်ပြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာပါသလား။ လောင်ကျွမ်းသောလျှပ်စစ်မီးအတွက်ငွေမပေးချေရလျှင်လျှပ်စစ်သုံးစွဲသူကိုတစ်ပိုင်းတစ်စမိတ်ဆက်သည်။
အိုးအိမ်ရုံးခန်းသို့အခမဲ့လျှောက်လွှာတင်ပါ။ မည်သည့်နမူနာတွင်မဆိုကျွန်ုပ်အကြံမပေးနိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်တင်းပလိတ်များနှင့်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုစုပေါင်းတိုင်ကြားချက်မရေးဖို့ရန်သင့်အားအကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းရေးသင့်သည် ...
ဘယ်မှာထုတ်ပေးနှင့်ကောက်ချက်ချရန်လူမှုရေးအလုပ်အကိုင်စာချုပ်ရဖို့။ မရသေးပါ။ ပြီးတော့သင်ဟာလူမှုရေးငှားရမ်းခအတွက်စည်ပင်သာယာတိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်သည်။ အပြည့်အဝသွားပါ။ ခန္ဓာကိုယ် execute ပါလိမ့်မယ်။ နေထိုင်ရာအရပ်မှအာဏာပိုင်များ - ...
အိုးအိမ်များနှင့်တိုက်ခန်းများ၏ခြားနားချက် Mezhuyev status ကိုကဘာလဲ?
နေစရာတစ်ခုနှင့်တိုက်ခန်းတစ်ခု၏ခြားနားမှုကားအဘယ်နည်း။ အချို့သောနှုတ်ဝမ်းလျှော။ "လူနေအိမ်ရာ" ၏အယူအဆသည် "တိုက်ခန်း" ၏သဘောတရားထက်များစွာကျယ်ပြန့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သီးခြားအိမ်နှင့်အခန်းတစ်ခန်းကိုဆိုလိုသည်။
ဆင်ခြေဖုံး koooperative အတွက် Privitizatsiya အများပြည်သူမြေယာ!
dacha သမဝါယမတွင်ဘုံမြေယာများအားပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း! ဥယျာဉ်မှူးများဥယျာဉ်မှူးများဥယျာဉ်သို့သွားသောလမ်းများသည်ဥယျာဉ်ခြံများရှိအများပိုင်မြေသို့မဟုတ်အများပိုင်မြေများဖြစ်သည်။
မိဘများသည်အခြားနေရာများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါကကလေးကိုအဖွားနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အသက် ၁၀ နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးတစ် ဦး ၏နေထိုင်ရာနေရာသည်သူ၏မိဘများသို့မဟုတ်မိဘတစ် ဦး ၏နေထိုင်ရာနေရာဖြစ်ပြီး ...
ODPU အတွက်ငွေပေးချေခြင်းရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဒေသ ၀ န်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မတ် ၁၃ ရက်ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၅၂၄၃-အက်ပ် / ၁၄ ဖြင့်အောက်ပါတို့ကိုတင်ပြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မေလ ၆ ရက်တွင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအစိုးရ၏အမိန့် ၃၅၄ အရထောက်ပံ့မှုအတွက်စည်းမျဉ်းများကိုပြင်ဆင်ရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။
တိုက်ခန်း, စင်္ကြံ, လသာဆောင်, သိုလှောင်မှုအခန်း၏အပူဧရိယာ၌အဘယျသို့ထည့်သွင်းသလဲ?
အဘယ်အရာကိုတိုက်ခန်း - စင်္ကြံ, loggia, သိုလှောင်ခန်း၏အပူareaရိယာတွင်ပါဝင်သည်? သေချာတာပေါ့စင်္ကြံ, loggia - မ။ စားစရာခန်း, အတွင်းပိုင်းလျှင်လည်းပါဝင်သည်။ စင်္ကြံနှင့်သိုလှောင်ခန်းသည်လူနေareaရိယာတွင်မပါ ၀ င်ပါ၊
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအတွက်မြေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကဘာလဲ။ အောက်, ဒါပေမယ့်လည်းအိမ်အနီးရှိမသာ ... ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ထားသောပိုင်နက်တွင်ပိုင်ရှင်များသည်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံစရာမလိုဘဲကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
စည်ပင်သာယာတိုက်ခန်းကိုဖလှယ်ခန်းများနှင့်အတူရွေးချယ်စရာ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုရှာဖွေကြိုးစားပါ။ ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကိုက်ညီပြီးအိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ကအများသုံးတိုက်ခန်းမှာနေတယ်။ ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကျတဲ့အချက်ကတော့အများပိုင်တိုက်ခန်းမှာ ...
လူမှုရေးအရငှားရမ်းထားသည့်တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ပြည်နယ်အခန်းကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်မိသားစုသည်လူမှုရေးအိမ်ရာတွင်နေထိုင်သည်၊ အခန်းငှားရန်မလိုပါ၊ အခြားအခန်းတစ်ခန်းကိုကြိုတင်ဝယ်ယူဝယ်ယူခွင့်မရှိပါ။
အဆိုပါ SDW ကဘာလဲ ???
MSW ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဘုံပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများраарворарашрагырарваорврррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссအခကြေးငွေ MSW အစိတ်အပိုင်း။ သင့်ရဲ့ကန်ထရိုက်တာအနုပညာအောက်မှာဒဏ်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ Rospotrebnadzor ကနေရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကျင့်ထုံး၏ 14.7 ။ ဇီဝစွန့်ပစ်၏ပွတ်တိုက်။ သင်အစိုင်အခဲအိမ်ထောင်စုစွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
, utilities များအတွက်ငွေပေးချေ၏စည်းကမ်းချက်များငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ?
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကို utilities များအတွက်ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များကိုပြောပြပေးပါလား။ သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ။ လတိုင်း၏ဒသမနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများသည်နောက်ကျသောကြောင့်သူတို့မှာကောင်တာအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ပါ။ မင်းအကြောင်း ...
အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စာရွက်စာတမ်းများ 13% ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲလိုအပ်လဲ?
တိုက်ခန်းဝယ်ယူမှု၏ ၁၃% ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သနည်း။ ဝင်ငွေလက်မှတ် ၂ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ င်ငွေခွန်၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းသဘောတူညီချက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလက်မှတ်၊
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 10 Next ကို 's Page
55 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,704 စက္ကန့်ကျော် Generate ။